Vatengi Service | Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd.
Kuronga Saiti uye kuronga kwehurongwa
Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, ipa yakanangwa, inoshanda tekinoroji mhinduro, midziyo yekuvharisa inotsigira zvivakwa zvekuronga zvakadzama.
Kuchengetedza uye kugadzirisa
DTS ine yayo yega-yekutengesa timu, isu tinogona kupa yakajairwa ekuchengetedza masevhisi kune vatengi. Kana chishandiso chako chiine matambudziko, maDTS mushure-ekutengesa mainjiniya anogona kuongorora uye kukutungamira kuti ugadzirise matambudziko ari kure. Kana mutengi asingakwanise kutsiva zvikamu zvega, DTS inovimbisa kusvika pachiteshi mukati memaawa makumi maviri nemana mudunhu redu uye mukati maawa makumi mana nemasere kunze kwedunhu.
DTS ine murabhoritari yekuyedza. Izvi zvivakwa zvakashongedzerwa zvizere kubereka izvo chaizvo mamiriro ekugadzirwa kwemaindasitiri.
Iwe unozowana rubatsiro kubva kune edu ekuvharisa nyanzvi uye chikafu tekinoroji, uye unokwanisa ku:
- Kuyedza uye kuenzanisa maitiro kuyerera nekushandisa (static, kutenderera, kuzunza masystem)
- Edza kunze kwedu kutonga system
- Set maitiro mbereko (bvunzo retort) yakagadzirirwa F0 kuverenga chishandiso)
- Edza kurongedza kwako neyedu nzira kuyerera
- Ongorora hunhu hwechikafu cheakapedza zvigadzirwa
Nerubatsiro rwevamwe, mayuniti ebvunzo anoshandiswa zvakare mukugadzira zvishandiso zveindasitiri, sekuzadza, kuvhara uye kupakata makambani.
Chigadzirwa bvunzo, technical fomula kuvandudza
Iwe unofanirwa here kugadzira iyo yekupisa yekugadzirisa recipe?
- Iwe wave muridzi anodada weDTS Retorts?
- Iwe unoda here kuenzanisa marapirwo akasiyana uye kugadzirisa ako ekuberekesa mbichana?
- Uri kuvandudza zvigadzirwa zvitsva?
- Iwe unoda here kuchinjisa kurongedza kutsva?
- Iwe unoda kuyera iyo F kukosha? Kana kune chero chimwe chikonzero?
Vashandi vako vese vanogona kubatsirwa nekudzidziswa kunoenderana munzvimbo dzakasiyana
Kushanda kwekushandisa kwekudzosera, kwakakodzera kune vanotanga, vane ruzivo kana vamwe vashandi vepanzvimbo
Masevhisi edu anogona kuitiswa munzvimbo yako kana muyedzo yedu LABS, iyo yakagadzirirwa kugamuchira vadzidzi uye kuvabatsira kuti vasanganise ruzivo rwezvinyorwa neruzivo rwekuita. Nyanzvi dzedu dzekurapa kupisa dzichakubatsira nekukutungamira iwe mukudzidzisa kwako kwese. mhedzisiro yekuedza kune yako indasitiri yekugadzira saiti.Hapana chikamu chebudiriro chinomisa michina yako yekumaindasitiri, ichikubvumidza iwe kuchengetedza nguva, kuwedzera kushanduka, uye kuenderera mberi nekugadzira uchidzidziswa
Zvikasadaro, isu tinogona kuita bvunzo dzese pachedu murabhu uye nekutevera mazano ako.Iwe unongoda kuti utitumire muenzaniso wechigadzirwa chako uye isu tinokupa iwe mushumo wakazara pakupera kwekuyedza.Ruzivo rwese rwakatsinhaniswa rwunotarisirwa se zvakavanzika.
Kudzidziswa mumuti wedu
Isu tinopa kudzidziswa kumuti (kugara uchichengetedza, kugadzirisa michini,
masimba uye chengetedzo masisitimu ...), mutemo wekudzidzisa wakagadzirirwa kutenderana nezvinodiwa zvako wega.
Murabhoritari yedu, isu tinogona kupa zvikamu zvekudzidzisa zvevashandi vako vanodzosera kumashure.
Ivo vanokwanisa kubva ipapo kuisa dzidziso mukuita panguva yechirongwa.
Kudzidziswa kunzvimbo yevatengi
Isu tinoziva fekitori yekugadzirisa, uye tinoziva kuti kana michina ikadzika, zvinokutorera mari yakawanda. Nekuda kweizvozvo, DTS yakashandisa zvakaomarara dhizaini uye zvikamu kune ese edu michina. Kunyangwe marabhoritari edu uye michina yekutsvagisa inogadzirwa neyemaindasitiri-giredhi zvikamu. Needu epamberi ekudzora mapakeji, mazhinji ekugadzirisa matambudziko anogona kuitwa zvemagetsi kuburikidza nemodem Zvisinei, kana iwe uchida mukati-kudyara tsigiro, kunyangwe epamberi epamberi ekutsigira masystem haatsivi kuve neDTS tekinoroji kana injinjini pane saiti. Vashandi vedu vanogona kukubatsira kuti utore mushini wako uye umhanye.
● Kuparadzirwa kwetembiricha uye kupisa mukati
MuDTS, zvakakosha kuti isu tibatsire vatengi kusarudza kurudyi kudzoka tobva tashanda navo kugadzirisa mashandisirwo, mashandiro uye kugadzirisa kwemidziyo Tinoshanda padhuze nevatengi vedu emukati ekurapa kupisa maitiro mvumo uye / kana yavo yekunze kupisa kurapwa gadzirira vanachipangamazano kuti vaone kuti yedu yekudzorera inoitwa uye inoshandiswa nenzira yakachengeteka, inoshanda zvakanyanya uye inoshanda.
Kana zvigadzirwa zvako zvichizotumirwa kuUnited States, kana kana chishandiso chako chiri chekutanga kumisikidzwa, kana kana kudzosera kwako kuri kugadziriswa kukuru, iwe uchafanirwa kuitisa tembiricha yekuparadzira uye bvunzo dzekupisa kupisa.
Tine zvese zvishandiso zvinodiwa pakuyedza kwakadaro.Takatenga michina yekuyera yakakosha (kusanganisira ma data logger) uye software yekuongorora data kuti tiite bvunzo nenzira kwayo pasi pemamiriro akakwana maererano nezvinodiwa zvako uye nekukupa yakadzika uye yakadzama bvunzo dzebvunzo.
Kubva payakatanga, DTS yakashandira indasitiri inogadzira chikafu, ichipa masevhisi kune vashoma veacid chikafu (LACF) uye zvinwiwa kuvabatsira kumisikidza nzira dzakachengetedzeka dzekugadzira chikafu uye maitiro. thermal kugadzirisa mhinduro uye masevhisi kune aripo uye matsva retort kugadzirisa vatengi pasi rese.
● FDA tendero
FDA faira kuendesa
Hunyanzvi hwedu uye nekushanda takabatana pamwe nevatinobatsirana navo vepasi rose vane hunyanzvi mukuendesa kweDFA basa zvinoita kuti tikwanise kudzora zvizere rudzi urwu rwekutumwa. Kubva payakatanga, DTS yakashandira indasitiri inogadzira chikafu, ichipa masevhisi kune vashoma veacid chikafu (LACF) uye zvinwiwa kuvabatsira kumisikidza nzira dzakachengetedzeka dzekugadzira chikafu uye maitiro. thermal kugadzirisa mhinduro uye masevhisi kune aripo uye matsva retort kugadzirisa vatengi pasi rese.
Kuongorora kwesimba kwesimba
Nhasi, kushandiswa kwesimba kunonetsa pamatanho ese. Kuongorora kwesimba kwemagetsi hakudzivisike nhasi. Kuti unyatsoita basa, kuongororwa kunofanirwa kuitiswa padanho rekutanga reprojekti.
Nei uchida kuongororwa kwesimba?
- Kutsanangura zvinodiwa nesimba,
- Dudzira mhinduro dzakakodzera dzehunyanzvi (nzvimbo yekushandisa, hunyanzvi, chiyero chekushandisa, zano rehunyanzvi ...).
Chinangwa chekupedzisira ndechekusimudzira uye kudzikisa kushandiswa kwesimba munzvimbo yese, kunyanya mumvura uye nemhepo, inova dambudziko guru rekusimudzira kwezana ramakumi maviri nemasere.
DTS yakaunganidza hunyanzvi hwakasimba mukuderedza simba remagetsi. Mhinduro dzedu dzinobatsira vatengi vedu kudzikisa zvakanyanya mvura uye kupisa kwemhepo.
Zvinoenderana neongororo, chiyero cheprojekiti yekudzosera, inosanganiswa nemamiriro chaiwo ekushanda kwenzvimbo yevatengi, tinogona kupa vatengi mhinduro dzakaomarara kana dzakareruka.
Tifonere isu +86 536-6549353